Zimbalwa zidlulileyo kamva thina kugqitywe ukuba ahlangane kwi-England. Emva ngexesha lethu iintlanganiso rhoqo ukwanda waza wathabatha indawo zonke phezu iglobhu. Ekugqibeleni, kwiinyanga ezintandathu kamva thina kugqitywe ukusa phambili kwaye get watshata. Ngoku ke, cinga ngokwethu njengoko coolest ezimbalwa kwi-ezaziwayo. Siyabulela Dating Isitshayina-Intanethi kuba ngokwenza kum luckiest umfazi ehlabathini. Mna ke apha jonga kuba umntu ukuba incoko ukufunda malunga ezahlukeneyo cultures, kodwa into elungileyo iza xa nani lincinane silindele kuyo. Siye sawela ngothando kunye ngamnye enye emva thina wathetha ixesha elithile.
Kukho rhoqo omkhulu chemistry phakathi kwethu kwaye sivuye kakhulu attracted ngamnye enye. Mna wachitha wam Isitshayina Unyaka Omtsha Iholide kwi-UK kwaye sino emangalisayo ixesha kunye. Kunjalo ngoku, sizimisele ukusebenza ngomhla we-visa isicwangciso kuba umtshato ngoku. Enkosi kuba yonke into, Dating Isitshayina-Intanethi mna abaziwayo Dating Isitshayina-Intanethi jikelele ngonyaka edlulileyo, kunye vague notion ndibe nokufumana wam olugqibeleleyo iqabane lakho. Emva ezimbalwa ubuxoki iqala, ndafumanisa ngokwam chatting ukuya lovely young elonyuliweyo ukusuka Hangzhou. Emva kweenyanga ezintathu e-imeyili emva kwaye ngaphambili, thina ekugqibeleni kuhlangatyezwana nazo, kwaye ngojanuwari mna watshata wakhe ngoku yahlula ixesha lam phakathi China kwaye USA ngelixa yena learns ngokwaneleyo isixhosa ukufumana i-visa kuza ubomi kunye nam ngokusisigxina. Mna ve balingwe ezimbalwa ngamazwe dating zephondo wam ixesha Dating Isitshayina-Intanethi ingaba kakhulu honest kwaye kakhulu zephondo ndafumanisa. Ngokuqinisekileyo, ndathola lucky kwaye timed yonke into nje ekunene, kodwa ndinga t kuba happier.
Njengoko omnye ezikhokelela-intanethi dating zephondo ukuba umhla kunye beautiful Isitshayina abafazi, sino zidityanisiwe amawaka Isitshayina icacile kunye zabo iyahambelana ukusuka jikelele ehlabathini. Ukuba osikhangelayo ezinzima Isitshayina dating kwaye budlelwane nabanye, ungafumana ngayo kwi Dating Isitshayina-Intanethi, apho siza kuzisa ndawonye amawaka-kanye abantu kwaye Isitshayina abafazi internationally
← China Lencoko - Isitshayina Incoko Amagumbi - Ngamazwe Incoko
Izinto Silindele Xa Dating a Isitshayina Umfazi Ngokwenene Isitshayina Hetalia →